Zara raha nisy nividy izany tamin’ny ankapobeny. Tany amin’ireo akoho fakana nofony efa maty sy ny hena no nifatratra ny rehetra. Mbola nijanona ho 12.000 Ar avokoa mants ny kilao tamin’ireto farany raha efa nisy nahatratra 140.000 Ar ny vorontsiloza lahy iray lehibe. 50.000 Ar kosa ny vorontsiloza vavy kelikely sy ny gisa raha 20.000 Ar mahery ny ganagana. 20.000 Ar latsaka kosa ny akoho, antony nanosika ny mpividy tsy handany volabe loatra. Maromaro rahateo ireo fety tsy maintsy hatrehina amin’ity volana jona ity. Zara raha nikarama vokatr’izany ireo mpamoly akoho sy vorona. 500 Ar mantsy no hamolosan’izy ireo ny akoho eny an-tsena, 1.000 Ar ny gana raha 2.000 Ar ny gisa sy ny vorontsiloza.